यो गर्मी सिजनमा आइसक्रिम भनेपछि केटाकेटीदेखि ठूला मानिस पनि हुरुक्कै हुने गर्छन् । त्यसमा पनि केटाकेटी र सहरीया युवती त आइक्रिम भनेपछि मरिहत्ते नै गर्छन् ।
आज हामी तपाईंलाई यस्तो आइक्रिमको रामकहानीबारे जानकारी दिँदैछौं । दैनिक हमीले गर्मीमा हत्ते गरेर खाने आइसक्रिम पहिलोपटक कहाँ बन्यो होला ? यसको सुरुआत कसरी भयो होला ? यसबारे धेरैलाई थाहा नहोला ।
सबैभन्दा पहिला आइससक्रिम इरान देशमा बनेको थियो । इतिहासअनुसार करिब आजभन्दा २ हजार वर्षपहिले इरानमा पहिलोपटक आइसक्रिम खाने चलन थियो । तर, त्यो बेला कसरी बनाइयो होला आइसक्रिम ?
तपाईंलाई थाहै छ– संसारमा बरफ बनाउने मेसिन बनेको धेरै भएको छैन । मेसिनबाट आइसक्रिम बनाउने तरिका र प्रविधि त त्यत्तिबेला थिएन पनि ।
हो, २ हजार वर्षपहिले मेसिनबिनै आइसक्रिम बनाइन्थ्यो, यखचलबाट । यो भिरालो छानो भएको घर हो, जुन आइसक्रिम बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । फारसका बासिन्दाले प्राचीनकालदेखि यो तरिकाबाट आइसक्रिम बनाउने गरेको इतिहास छ ।
इरानका मरुस्थलीय क्षेत्रमा यस्ता भवनका विभिन्न भग्नावशेष अहिले पनि पाइन्छ, जुन पहिला आइसक्रिम बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यहाँका बासिन्दाले त्यस्ता वस्तुको अहिले संरक्षण गरेर राखेका छन् ।
कसरी बनाइन्थ्यो त्यस्तो घरबाट आइसक्रिम ? यो पनि भनी हालौं । त्यस्तो घरको भुइँतला भूमिगत रूपमा निकै गहिरो हुन्छ । गहिरो भागमा रहेका तख्तालाई बरफ जमाउन प्रयोग गरिन्छ । फेला परेका यस्ता तख्तामध्ये कतिपय त करिब २५ वर्ष पुरानासम्म रहेको पनि बताइन्छ ।
अनि, पछि ती तख्तालाई अर्कै विशेष पदार्थबाट तयार पार्न थालियो । त्यसलाई गर्मीमा पनि नतात्ने गरी बुद्धि लगाएर बनाइन्थ्यो । यतिसम्म कि, त्यसमा वर्षदिनसम्म पनि बरफ राख्न सकिन्थ्यो ।
त्यसबेला स्टार्च, बरफलगायत चिज मिसाएर परम्परागत तरिकाले आइसक्रिम बनाइन्थ्यो, सुरु–सुरुमा त्यसलाई फालुदा नाम दिइयो ।
आज हामीले दैनिक खाने आइसक्रिम त्यत्तिबेलाकै फालुदा हो । जसलाई आज हामी आइसक्रिम भन्छौं । र, मिठो मानी–मानी खान्छौं ।